Datoor Abiy Axmed Caliy, Guddoomiyaha OPDO, oo loo wado RW Itoobiya – Radio Daljir
Maarso 28, 2018 2:05 b 0
Shir hadda u soo dhamaadey isbaheysiga haya xukunka Itoobiya ee EPRDF ayaa Datoor Abiy Axmed Caliy, Guddoomiyaha xisbiga OPDO, u doortey guddoomiyaha cusub ee EPRDF.
Datoor Abiy Axmed waa Muslim ka soojeeda qowmiyadda Oramada, hooyadini waa Kiristaan.
Sida la filayo xisbiga talada haya ee EPRDF ayaa baarlamaanka Itoobiya u soojeedin doona in Datoor Abiy Axmed loo dhiibo hoggaanka Itoobiya oo uu noqdo Raysal Wasaaraha cusub ee dalka. Haddii baarlamaanku uu aqbalo soojeedinta isbaheysiga, Datoor Abiy Axmed waxa uu noqon doonaa Raysal Wasaare Muslim ah kii Itoobiya ugu horreeyey.
Xubanaha koonsilka EPRDF ee doortey hoggaanka isbaheysiga waa 180 xubnood oo ka kooban min 45 xubin, kana kala yimaada afarta xibsi ee talada dalka wada haya, kala ahna xisbiga Oramada (OPDO), Amxaarada (ANDM), kan Koonfurta Itoobiya (SEPDM), iyo kan Tigranya (TPLF).
Datoor Axmed Abiy oo ah 42 sano jir ayaa hore u soo ahaa Wasiirka Sayniska iyo Taknoolajiyadda, qayb weynna ka ahaa aasaaskii laanta wardoonka wararka iyo isgaarsiinta Itoobiya ee loo yaqaan INSA.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19872